Rose of Sharon: စကာင်္ပူနေသူများသို့
Posted by rose of sharon at 6:31 AM
Chinese Gardenရောက်ရင်သာ ကျွန်မနေခဲ့ဖူးသော နေရာလေးလို့ သတိရခဲ့ပါလေ။
စကာင်္ပူမှာ ပျော်ပါ နှင်းဆီ..။
မိုက်တယ်ကွာ စ က ၄ ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ တစ်ကယ်ကို အပျင်းပြေတယ်။် တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ ငြီးငွေ့ လာမယ်။
ကဲ ဘလောဂါများနဲ့ ဆုံစည်းနိုင်ပါစေ
Kyaw Hnin Se Lwin April 3, 2011 at 9:41 AM
မောင်လေး April 3, 2011 at 12:35 PM
Santosa ကို လိုက်ပို့လိုက်အစ်မ...ခုပိုလှလာပြီ..။universal studio၊tiger live၊
sound of the sea၊အင်း...ပြီး..မာလိုင်းယွန်းပေါ်တက်...၊အဲ....ကလေးတွေ
ထမင်းလည်းချက်ကြွေးချင်တာ...၊ခက်တာက ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ချက်ပြီး
ကိုယ်တိုင်တောင်မစားနိုင်တော့လည်း.....အစ်မတို့ကို ဒွတ်ခမပေးတော့ပါဘူး :))
Anonymous April 3, 2011 at 12:36 PM
လေးယောက်ခန်းယူပြီးမှ ၃ယောက်ပဲ သွားဖြစ်တော့တာလား
မောင်မျိုး April 3, 2011 at 3:22 PM
ပျော်ကြပါစေ ဘလော့ဂါတွေက အပြင်မှာလည်း ခင်တတ်ကြပါတယ် ။
Shinlay April 3, 2011 at 3:53 PM
ကျောက်ဂစ်ဂျန်းရှင်း April 3, 2011 at 8:48 PM
ဟင်း...အိမ်က ဟာကြီးကို တမင်ထားခဲ့တာမို့လား...
စလုံးလဲ လိုက်လည်ချင်ပါ့ ဗျာ...တရက်လုံးလုံး လေယာဉ်ပေါ် ထိုင်နေရတာ စိတ်ပျက်လို့...
Pls see the below link. take children and enjoy it.
မြူးမြူး April 4, 2011 at 4:42 PM
တွေ့ချင်တယ် မမရို့စ်ရေ.. ဘယ်နေ့ရောက်မှာလဲ.. ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖဘမှာ မက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုက်မယ်.. ဆက်ဖြစ်အောင်ဆက်နော်..း)
mosquito April 4, 2011 at 10:52 PM
သူငယ်ချင်းကို တွေ့ရမှာ မို့ ပျော်နေပါသည်... ဟိဟိ
sosegado April 7, 2011 at 3:24 PM
rose of sharon April 7, 2011 at 5:46 PM
ကော်မန့်လေးများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်... ကော်နက်ရှင်မကောင်းလို့ တခုချင်း မပြန်နိုင်ခဲ့တာပါ...